စပါးလင်အကြောင်းသိကောင်းစရာ( Lemon Grass ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
စပါးလင်အကြောင်းသိကောင်းစရာ( Lemon Grass )
Thursday, January 30, 2014 Taunzalat
စပါးလင်ကို ရုက္ခဗေဒအမည်အရ Cymbopogon လို.ခေါ်တွင်ပြီးအင်္ဂလိပ်
လိုတော့..lemon grass , citronella grass , barbed wire grass လို.လဲ
စပါးလင်ကိုစတင်တွေ.ရှိရာမူရင်းဒေသကအိန္ဒိယဖြစ်ပြီး..ယခုအခါ မြန်မာ ၊ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်အပြင်..အာရှတိုက်အပြင်အခြားနိူင်ငံများမှာလည်းတွေ.ရှိ
စပါးလင်ဟာ ရနံ.ရှိတဲ့ မြက်( ၄၅) မျိုးစာရင်းမှာပါဝင်ပြီး..အမြင့်ပေ (၅-၆) ပေ
(သို.) ၂ မီတာအထိရှည်လျားတတ်ကြပါတယ်..။ပင်စည်ကအပြင်မှာ
အနီရောင်သန်းပေမယ့် အပေါ်ယံအခွံမာများဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ ..ဆင်စွယ်
စပါးလင်မှာ Citric ဓါတ်ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး...လူ.ခန္စာကိုယ်အတွက်ဗိုက်
တာမင်( A ) ဓါတ်ကို ကောင်းစွာပံ့ပိုးပေးနိူင်ပါတယ်...။
စပါးလင်ရဲ.ပင်စည်အဖြူရောင်အပိုင်းတွေကို အာရှ မှာ ဟင်းချို ၊ အသားဟင်း
ကနဲ. အချို.သောလက်တင်အမေရိက နိူင်ငံများမှာလက်ဖက်ရည်နှင့်တွဲပြီး
သောက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်..( ဥပမာ ..တိုဂို ၊ မက္ကဆီကို စသောနိူင်ငံများ )
စပါးလင်မှာ lemonal လို.သတ်မှတ်တဲ့ သင်းပျံ့.မွှေးကြိုင်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိ
ကြောင့်..ယခုအခါ ဆပ်ပြာ ၊ ရေမွှေး ..စသည့်အလှကုန်ပစ္စည်းများမှာပါအသုံး
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ အစာအိမ်ရောင်နာခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း ၊အကြော
Admin ( ဟင်းချက်နည်းများ )
Posted in: စပါးလင်